Calendar 2014 “Town” Ikhalenda - Umagazini Design
Ikhalenda Idolobha iyithuluzi lezandla lephepha elinezingxenye ezingabuthelwa ngokukhululekile ekhalendeni. Hlanganisa izakhiwo ngezindlela ezahlukahlukene futhi ujabulele ukudala idolobha lakho elincane kakhulu. Imiklamo yekhwalithi inamandla wokushintsha isikhala nokuguqula imiqondo yabasebenzisi bayo. Banikeza induduzo yokubona, ukubamba nokusebenzisa. Zihlotshiswe ngokukhanya nezinto zokumangala, zicebise isikhala. Imikhiqizo yethu yasekuqaleni yakhelwe kusetshenziswa umqondo we-Life nge Design.
Igama lephrojekthi : Calendar 2014 “Town”, Igama labaklami : Katsumi Tamura, Igama leklayenti : good morning inc..
Msombuluko 26 Julayi 2021
Ikhalenda Katsumi Tamura Calendar 2014 “Town”